5 Uninzi lweNdawo Engalibalekiyo yeeNdalo eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Uloliwe eSwitzerland > 5 Uninzi lweNdawo Engalibalekiyo yeeNdalo eYurophu
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/10/2020)
Iincopho zentaba ezibalaseleyo, Iintlambo ezandayo, iingxangxasi, amachibi, kunye nezilwanyana zasendle ezahlukeneyo, Ikhaya laseYurophu kwezona ndawo zolondolozo lwendalo zingenakulibaleka. Ukuchitha imali kwiindawo ezinkulu eziluhlaza eziqhakaza entwasahlobo, 5 kwezona ndawo zintle zolondolozo lwendalo eYurophu zikhuselwe iipaki zesizwe ezamkela abahambi ezivela kwihlabathi liphela. Ukuba unomdla wokuhamba intaba, ukuhamba, okanye ukonwabela ingcwele yendalo, ke uya kuyithanda yethu 5 Oovimba bendalo abangasoze balibaleka eYurophu.
1. Indawo yokuGcina izilwanyana yaseBelluno Dolomite e-Itali
Indawo yokugcina indalo yaseBelluno yasekwa kwi 1990 Ukukhusela indalo entle yeeDolomites. Ifumaneka emaphethelweni eDolomite kwi kumantla Italy, Ipaki yendalo yeBelluno iyaphefumla ngexesha lasentwasahlobo. Iinduli eziluhlaza kunye neencopho zeentaba ezintle zigqunywe ziikhaphethi zeentyatyambo. Nokuba ungakanani na umgangatho womzimba wakho, uya kuba nexesha elimnandi lokujonga lo myezo wendalo, kuba kukho iindlela ezahlukeneyo. Ugcino lwendalo iBelluno eYurophu luphelele kubo bobabini abaqalayo kunye nabakhenkethi abanamava.
32000 Iihektare zezityalo ezinqabileyo kunye neencopho zelitye lekalika, Indawo yolondolozo lwendalo yaseBelluno isusela kwintlambo yeCismon iye kwithafa yasePiave. Ukwahluka okutyebileyo kokubini kwizilwanyana nakwinkcubeko enkosi kwiilali ezininzi ezikummandla we-Piave Valley. Yiyo loo nto xa undwendwela indawo yokugcina izilwanyana yaseBelluno eYurophu, ufumana ithuba lokuba ube nohambo olukhulu lokuhlola izinto ezimangalisayo zendalo kunye neempawu zenkcubeko.
Ufika njani eBelluno Nature Reserve?
Indawo yokugcina indalo yaseBelluno ingaphantsi kune 3 ukuhamba ngololiwe iiyure ukusuka eVenice.
Ndingahlala phi Ndijikeleze iBelluno Park?
Zininzi iindawo zokuhlala ezintabeni, B&B, neehotele.
Zingaphi iintsuku endifanele ukuchitha ngazo eBelluno Nature Reserve?
Ugcino lweBelluno Dolomites yenye yezona zikhulu kwaye 5 eyona ndawo yolondolozo lwendalo ingalibalekiyo eYurophu. kwakhona, IBelluno yipaki entle yendalo, ke kuya kufuneka uchithe ubuncinci 3 Iintsuku zokuhlola kunye nokuzonwabisa ngamachibi, ezintabeni, kunye nobungangamsha bendalo.
2. Indawo yokuGcina izilwanyana yaseHohe Tauern eOstriya
Olona vimba lukhulu kwindalo kwi-European Alps ikwi-Austria. Indawo yaseHohe Tauern likhaya 10,000 iintlobo zezilwanyana, 1,800 izityalo, kunye neGrossglockner, Incopho ephezulu ye-Austria, e 4,798 iimitha ngaphezu komgangatho wolwandle. Le ncopho ibalaseleyo ihlala phakathi 200 ezinye iincopho, izilwanyana eziluhlaza, amachibi, kunye neengcango zamanzi.
Iintlambo zolondolozo lwendalo iHohe Tauern zizele zii-glaciers ezintle, yakudala kunye iimbonakalo zelali ezintle, iikhaphethi zeentyatyambo, namahlathi. Le paki yendalo yaseYurophu yindawo yokugcina iindwendwe zayo kunye nabahlali abanethamsanqa kwimimandla ejikelezileyo. Ukuthi ngqo, Umzila weNdalo we-Umbalfalle weengxangxasi kunye nomlambo, apho uza kubona ezinye iingxangxasi ezimangalisayo eYurophu.
Ufika njani eHohe Tauern Nature Reserve?
Indawo yolondolozo lwendalo iHohe Tauern isondele kakhulu edolophini iMallnitz. IVienna eya eHohe Tauern ngololiwe imalunga 5 iiyure.
Ndingahlala phi kufutshane neHohe Tauern Park?
IMallnitz yidolophu eyaziwayo eHohe Tauern eneendawo ezininzi zokuhlala.
Zingaphi iintsuku endifanele ukuchitha ngazo kwi-Hohe Tauern?
Zininzi ezahlukeneyo iindlela zokunyuka intaba eHohe Tauern Ugcino lwendalo, ucwangcise a 4-5 Uhambo lweentsuku lungcono. Ngale ndlela unokujonga ipaki kunye needolophu ezikufutshane.
3. Indawo Ecrins Yendalo eFrance
Njengoko unyuka ngale ndawo indalo imangalisayo kwiiAlps zaseFrance, qiniseka ukuba ujonge iinkozi, izitulo, umngcunube, nezinye izilwanyana ezininzi zasendle eziyibiza ngokuba likhaya. Le ndawo imangalisayo kwiiAlps zaseYurophu yenye yeendawo ezintle iipaki zesizwe uya kuba nethuba lokufumanisa.
Umkhenkce, iintaba eziphakamileyo, iindawo ezi-alpine eziluhlaza, nomoya omtsha, Indawo entle ye-Ecrins kunye nokuma komhlaba kuya kubamba umphefumlo wakho.
Ufika njani kwi-Ecrins Nature Reserve?
Unokufikelela kwipaki yesizwe ye-Ecrins naphi na eFrance. Indawo yokugcina indalo imi kufutshane nomda waseFrance ne-Itali. Kukufuphi neLyon, eMarseilles, naseGeneva eSwitzerland, ngoko uloliwe ukuhamba ngaphesheya France ukuya Ecrins khetho olukhulu.
Ndingahlala phi kufutshane neEcrins Park?
Ukusuka kwiihotele ezilungele usapho ukuya kwiindawo eziqeshisayo ngeholide, kukho iyantlukwano yeendawo zokuhlala ezingqonge indawo yogcino yendalo i-Ecrins.
Zingaphi iintsuku endifanele ukuchitha ngazo kwii-Ecrins?
Ixhomekeke kuwe. Nokuba uthatha isigqibo sokuzinikezela 7 iintsuku okanye uye kwikhefu leempelaveki, uya kuba nohambo oluphuphayo.
4. I-Saxon yaseJamani kunye neBohemian Switzerland Indawo yokuGcina iNdalo kwiRiphabhlikhi yaseCzech
Indawo emangalisayo yendalo iSaxon Switzerland isuka eJamani iye kwiRiphabliki yaseCzech. Iintaba zelitye lekalika i-Elbe kunye ne-Pravcicka brana rock edume kwihlabathi sele zibonakalisile "ngeNgonyama, igqwirha, kunye nomdlalo bhanyabhanya weWardrobe ”. Le ndawo yolondolozo lwendalo iphefumlayo yenye yezona ndawo zilibalekileyo kwindalo eYurophu kunye neendawo zokujonga ezinobuntu kwi-Instagram ngaphezulu komwonyo..
Ihlobo okanye ubusika, iindlela eziluhlaza, kwaye iindlela ziphawulwe kakuhle kwaye kulula ukwahlula phakathi kwezityalo eziluhlaza kumacala omabini omwonyo kunye nomlambo. ISaxon eJamani, okanye iBohemian Switzerland, kuxhomekeke kuhambo lwakho loqobo okanye indawo yokugqibela oya kuyo, eyindawo entle ye-oasis kunye nokuhamba ngokuhambahamba kwabahambi abavela kwihlabathi liphela.
Ufika njani eSaxon eJamani okanye kwiBohemian Switzerland yoLondolozo lweNdalo?
Unokufikelela kule ndawo indalo imangalisayo IYurophu ngohambo losuku ukusuka ePrague okanye eDresden.
Ndingahlala phi ngakuPaki weSizwe?
Kuba indawo yolondolozo lwendalo ikumda weJamani kunye neCzech Republic, iinketho zokuhlala azinasiphelo.
Zingaphi iintsuku endifanele ukuchitha ngazo eBohemian Switzerland?
Uhambo losuku luyimfuneko ngokupheleleyo, kwaye ukuba unokuchitha iintsuku ezimbalwa, ke kuyacetyiswa kakhulu.
5. I-Ordesa kunye neMonte Perdido Reserve Reserve eFrance
Ifunyanwa embindini phakathi kwe Spain ne France, I-Ordesa kunye neNtaba iPerdido zezinye zezona ndawo zigcina indalo eYurophu. Nangona ibekwe kwicala laseFrance kunye nentlanganiso ye 3,355 m. igama lentaba iMonte Perdido yafumana igama layo kuba yayingabonakali kwicala laseFrance lomda.
Umtsalane Ordesa zombini zi Indawo ye-UNESCO yeLifa leMveli eYurophu kunye nendawo yokugcina izilwanyana kunye nezilwanyana. Likhaya kwintlambo ye-Ordesa, iingxangxasi, ezahlukeneyo zasendle, kubandakanya ukhozi lwegolide, yaye 32 iintlobo zezilwanyana ezanyisayo. Njengoko unyuka kwaye uncoma uluvo lweentaba zePyrenees, Qiniseka ukuba ujonge iiMarmot, Ookhetshe, nezikhova, njengokuba. ngoko ke, Indawo yolondolozo lwendalo i-Ordesa neMonte Perdido yindawo engcwele emangalisayo kunye nokuya eYurophu kulo naluphi na uhlobo lomhambi.
ukusuka 3 iiyure ’ukuya 2 uhambo lokuhamba iintsuku, I-Ordesa ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba, kumanqanaba ahlukeneyo omzimba.
Ufika njani kwiOrdesa yendalo?
Indawo yokugcina iOrdesa neMonte Perdido iyafikeleleka ukusuka eFrance naseSpain. Ukusuka eZaragosa ukuya eTorla-Ordesa imalunga 5 iiyure okanye 3 iiyure ukusuka eBarcelona. Ukuba uhambela eFrance, emva koko iTououse 7 iiyure kude.
Ndingahlala phi ngakuOrdesa Park?
Unokufumana indawo yokuhlala enkulu eTorla, ukusuka ezindlini zeendwendwe nakwiihotele.
Zingaphi iintsuku endifanele ukuchitha ngazo kwindawo yokuGcina indalo iOrdesa?
I-Ordesa kunye neNtaba iPerdido zikwabizwa ngokuba yipaki yaseYosemite yaseYurophu. ngoko ke, kufuneka uhlale ubuncinci 3 iintsuku, kubandakanya ukuhamba intaba kunye nexesha lokuphumla.
5 kweendawo zolondolozo lwendalo ezingalibalekiyo eYurophu zinika iimbono zeentaba kunye neendlela zokuhamba intaba ukuya kwiingxangxasi ezintle zehlabathi.. ngoko ke, ukunyuka intaba kunqumla iintlambo, Ukuncoma amasimi eentyatyambo kunye neencopho zeentaba sesona sipho sikhulu onokuthi uzinike sona. Akukho nto ikhululekileyo kwaye ikhuthazayo kunendalo yasendle kumazwe aseYurophu amangalisayo.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise iholide yakho yoovimba bendalo abayithandayo ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "5 Uninzi lweeNdawo ezingalibalekiyo eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url =I-https://www.saveatrain.com/blog/unforgettable-na .......-reserves-europe/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha iilwimi / ja ukuba / fr okanye / de yaye ngaphezulu.